Inona ireo backlinks tsara ho an'ny SEO?
Ny raharaham-barotra momba ny fananan-tany dia sehatra an-tserasera goavana izay ny sampana lehibe indrindra manana laza malaza dia manana fahafahana hihaona amin'ny SERP. Na izany aza dia afaka miady ho an'ny tanjona ny mpandraharaha tsirairay. Mba hampahafantarana ny mpifaninana tsenanao lehibe indrindra amin'ny orinasa, mila mamorona ny tranokalanao amin'ny mpampiasa ianao ary manatsara izany araka ny fitsipika momba ny fikarohana. Ny singa fototra amin'ny fampielezan-kevitra fanatsarana ny tetikasa dia ny fananganana rohy. Ny fanorenana rohy dia dingana amin'ny famoronana rohy fidirana avy amin'ireo loharanom-baovaon'ny loham-pahefana manam-pahefana. Izy io dia ampahany amin'ny fomba fitsaboana tsy miankina amin'ny fanjakana izay tokony hatao taorian'ny fanatsaràna ireo singa rehetra ao amin'ny tranokalanao - telemedicine services. Backlinks dia manampy amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ary mampitombo ny fahefan'ny marika. Na izany aza, araka ny nodinihako teo aloha, mba ho mpitarika ny tsenam-barotra dia mitaky fotoana sy vola be. Izany no mahatonga anao ho vonona ny hivezivezy sy handany fotoana be ny dingan'ny fahazoan-dàlana horaisina. Ankoatra izany, mila mahafantatra ireo loharano ahafahanao mahazo backlinks tsara ho an'ny SEO. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny tranokalan'ny tranokala SEO izay afaka manatsotra ny fanentanana fananganana rohy ary hampiroborobo ny ezaka SEO anao.
Loharano misy backlinks tsara ho an'ny tany SEO
Real estate SEO backlinks generating dia dingana mba hahazoana rohy mankany amin'ny tranonkalanareo avy amin'ny toerana hafa. Ny tsenan'ny dizitaly dia toy ny fifaninanana malaza amin'ny fahitalavitra malaza izay ahazoan'ireo mpandray anjara amin'ny safidim-bahoaka (goavana) lehibe indrindra. Ny modelim-pandraharahana ao amin'ny Google dia mifototra amin'ny famoahana ireo mpikaroka ireo fampahalalam-baovao mahaliana sy ilaina. Ny hany fomba handinihana ny lazan'ny votoaty dia ny manisa ny fifamoivoizana rehetra manerantany mamokatra io votoaty io ary ny isa ny ampahany sy ny rohy aminy mendrika. Ohatra, ny tranonkala sosialy malaza Facebook dia manana 32.348.008.110 backlinks. Izy io dia mpitarika tsy manara-penitra amin'ny SERP noho ny isan'ny fanontaniana raha maro ny mpampiasa mifidy azy io toy ny loharanom-baovao tomponandraikitra.
Na izany aza, raha ny tena izy, raha ny loharanom-baovao malaza sy marefo loatra, ny olana momba ny backlinks dia mety ho olana. Ankoatr'izay, tsy ny rindran-damina rehetra dia mitovy, ary ny sasany amin'izy ireo dia afaka mitondra ny tranonkalan'ny tranom-bakoka ho ratsy kokoa noho ny famantarana tsara. Google dia mahay mandanjalanja ary afaka manavaka tsotra izao ny rohy spammy sy manerantany. Ny botsika Google dia mamakafaka ny maha-zava-dehibe ny votoatin'ny toerana misy ny rohy ary koa ny laza avy amin'ny tranonkala iray misy azy ireo.
Izany no antony hitenenako ato amin'ity lahatsoratra ity ny loharanom-baovao tomponandraikitra izay ahafahanao mahazo backlinks ho an'ny tranokalanao.
Ny rohy tsy hita avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-barotra
Ny ampahany tena ilaina amin'ity paikady ity dia mifototra amin'ny famoahana ny habetsaham-pahamendrehana manoloana ny tompon'ny orinasa hafa. Ohatra, afaka manome lanja ny olona ao amin'ny lisitry ny mailaka ianao amin'ny fanomezana azy ireo doka ho an'ireo orinasa eo an-toerana izay niarahanao. Ny ampahany amin'ny fifanakalozana eo amin'ny raharaham-barotrao dia tokony ahafahana mampifandray ny tranokalanao. Raha manao izany ianao, dia manorina fifandraisana eo amin'ny mpivady miaraka amin'ny mpiara-miasa aminao ary mahazo jiosy mifandraika amin'ny toeranao. Ny mpiara-miasa amin'ny fandraharahana dia mety hampiditra teny fototra ao anaty rohy iray avy amin'ny tranonkala mifototra amin'ny fiarahamonina misy anao. Hanampy be dia be ao amin'ny tranokalanao SEO izany.
Ny fikarohana fikarohana tsotra dia hanome anao lisitry ny tranonkala izay manana fijoroana vavolombelona momba azy ireo amin'ny ny orinasanao. Ny ankamaroan'ireo loharanom-baovao ireo dia mampifandray ny olona nandao ny famerenana. Raha mbola tsy manana pejy tahaka izao ianao, dia manorata mba hamoronana iray ary angataho ny olona handao ny heviny any. Hanampy anao hahazoana rohy mahazatra kokoa sy hampiakarana ny fahefanao eo imason'i Google.